निभ्दैछन् आत्मीकी दियोहरु । - Nepali Christians Site
निभ्दैछन् आत्मीकी दियोहरु ।
Posted by Simon Rai on September 22, 2013 at 10:19am
दियो भनेको त्यो हो जसले आफु रित्तिएर अरुलाई प्रकाश दिने काम गर्छ ।
अन्धकारमा भौतारी रहेकाहरुलाई बाटो देखाउने काम गर्छ । जसले गर्दा बाटो बिराई रहेकाहरुका निम्ति एउटा नयाँ आशा बन्न सक्छ । दुःख कष्टमा छट्पटिएकाहरुको निम्ति सान्त्वनाको मलम बन्न सक्छ । शोक र उदासले भरिएको जीवनमा खुशी र उमंग ल्याउन सक्छ । अन्धकारलाई छिचोल्दै झिसमीसे उज्यालोमा घामको किरण छरिए झै हरेकको जीवनमा त्यो बिहानी आउन सक्छ । तर जब दियो आफै निभ्दै छन् भने कसरी प्रकाश दिन सक्छ ? कसरी अरुको निम्ति उदाहरण बनेर बाटो देखाउन सक्छ ? कसरी एउटा आशा बनेर खुशी र उमंगसँगै त्यो बिहानी ल्याउन सक्छ ?
त्यसकारण पवित्र आत्माको साहायताले बल्ने यस्ता आत्मीकी दियोहरु प्रति सम्बेदनशील बन्न जरुरी देखिन्छ । किनकी यो आजको आवश्यकता हो नयाँ पुस्ताहरुको निम्ति, जोहरु साँच्चिनै दिन प्रति दिन आत्मीकी जीवनमा कम्जोर बन्दै जादैछन् र एउटा छुट्टै मार्ग पट्टि लम्किदै छन् । पहिल्याउनु पर्ने बाटो छोडेर अन्तै डोर्याईन्दै छन् । त्यस कारण बेलैमा सचेत नभए अबको नयाँ गोठालाहरुले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्ने छ ।
पावलले भनेका छन् “तपाईंहरु आफ्ना निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस् । पवित्र आत्माले तापाईंहरुलाई बगालका जिम्मावाल बनाउनुभएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाहा तपाईंहरु गर्नुहोस् । किनभने मलाई थाहा छ कि म गएपछि डरलाग्दा ब्वाँसाहरु तिमीहरुका माझमा पस्नेछन्, जसले बगाललाई बाँकी राख्नेछैनन् ।” (प्रेरित २०:२८,२९) आजको मण्डलीमा त्यस्ता धेरै ब्वाँसाहरु पसि सकेका छन् । प्रत्येक भेडाहरुका आत्मामा कम्जोर बनाई रहेका छन् । जसले गर्दा परमेश्वरको ब्यवस्थालाई भन्दा संसारिक आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिईदै छ । त्यस्ता डरलाग्दा ब्वाँसाहरुले आज एउटा भोली अर्को पर्सि अर्कै गर्दै दिन–दिनै प्रभु येशूले अमुल्य रगत बगाएर किनिएका भेडाहरु हराउदै जाँदा बगालका जिम्मावल गोठालाहरु भने आफ्नो पद र ओहदा खोज्दै ठिक्क भएको छ । बगाललाई आवश्यक पर्ने आत्मीकी खुरागहरु पस्किन सकेका छैनन् । आत्मीकी शरीरलाई आवश्यक पर्ने ताजा भोजन जुटाउन सकेका छैनन् । जसो–तसो आत्म विश्वास जुटाएर खडा भएका व्यक्ति पनि जिम्मावालको चरित्र र व्यवहार देखेर पानी नपाएका फुल चर्को घाममा ओईलाए झै भएको छ ।
प्रभु येशूले मत्ती २४ अध्यमा भन्नु भएको कुरा भलै महा संकष्टको लागी होला तर आजको मण्डलीमा पुरा भई रहेको छ । “दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ ।” (मत्ती २४:१२) त्यसै कारण मण्डलीमा आत्मीकी दियोहरु निभ्दैछन् । त्यस्ता दियोहरुको संरक्षण कसले गर्ने त ? के यो काम ती जिम्मा लिने गोठालाहरुका होईनन् ? के यो काम ती अगुवाहरुका होईनन् जसले पुल्पिटमा खडा भएर “म प्रभुको दास” भन्छन् ? सायद ती जिम्मावालहरुले ख्रीष्ट येशूले दिनु भएको त्यो अन्तिम आदेशलाई बिर्से जस्तो छ । “यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरुलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरुलाई बप्तिस्मा देओ, मैले तिमीहरुलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरुलाई सिकाओ ।” (मत्ती २८:१९,२०)
आज हरेक जिम्मावालहरुले निभ्दै गरेको दियोमा आत्मीकी तेल हाल्दै दियो बाल्ने पावलसँग सिक्नु पर्छ कि कसरी आत्मीकी दियोहरुको संरक्षण गर्नु पर्छ ? यसबारेमा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण होस् ।
Comment by Simon Rai on October 1, 2013 at 5:12pm सर्व प्रथम परमेश्वरलाई धन्याँवाद छ साथै ख्रीष्टका प्रीयहरुसबैलाई जयमसीह !
वास्तवमा अहिले मण्डलीमा देखिएका यस्ता कमी-कम्जोरीले मण्डलीको उद्यस्य के हो भन्ने कुरामा प्रस्न उठेको छ । त्यसकारण सबैले प्राथर्नामा एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्नु छ ।
तर्पांहरु सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउँन्
तर्पांहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्याँवाद ।
Comment by bhumikala_thulung on September 28, 2013 at 6:52pm यदि मैले, ‘यो नराम्रो मानिस मर्नेछ भनें।’ भनें तिमीले त्यो चेतावनी पनि उसलाई दिनुपर्छ। तिमीले उसलाई भन्नु पर्छ, आफ्नो जिन्दगी बद्ली गर अनि नराम्रो काम गर्न छोड। यदि तिमीले त्यो मानिसलाई चेताउनी दिएनौं भने त्यो मर्नेछ। किनकि त्यसले पाप गरेको छ। तर म तिमीलाई त्यसको मृत्युको उत्तरदायी बनाउँछु। किनकि तिमी त्यसकहाँ गएनौ अनि त्यसको जीवन बचाएनौ।
19 “यो पनि हुन सक्छ तिमीले कुनै मानिसलाई चेतावनी दियौ, त्यसलाई त्यसको जीवन मार्ग बद्ली गर्नका निम्ति सम्झायौ अनि नराम्रो काम नगर्नु भन्यौ। यदि त्यसले तिम्रो कुरा सुनेन भने त्यो मर्नेछ। त्यो मर्नेछ किनकि त्यसले पाप गरेको छ। तर तिमीले उसलाई चेतावनी दियौ यसकारण तिमीले आफ्नो जीवन बचायौ। म ढोका हुँ। जुन मानिस मद्वारा पस्दछ ऊ जोगिन्छ। त्यो मानिस भित्र आउने र बाहिर जाने योग्य हुँदछ। उसले चाहेको जति सबै कुराहरू पाउनेछ। 10 एक चोर चोर्न, मार्न र ध्वंस गर्न मात्र आउँदछ। तर म जीवन-दान गर्न आएँ-त्यस्तो जीवन जुन पूर्ण र असल छ।
11 “म असल गोठालो हुँ। असल गोठालोले भेंडा़का निम्ति आफ्नो जीवन प्रदान गर्दछ। 12 पैसा दिएर राखेको कर्मी र खास गोठालोमा भिन्नता हुँदछ। तलब दिएर राखेका गोठालाहरूको आफ्नो भेंडा़ हुदैन। जब उसले ब्वाँसो देख्दछ, ऊ भेंडा़लाई छाडेर भाग्दछ। तब ब्वाँसोले भेंडा़हरूमाथि आक्रमण गरेर तितर-बितर पार्दछ। 13 किनभने ऊ तलबमा राखिएको मान्छे हो। त्यसकारणले भाग्छ। उसले भेंडा़को देखरेख गर्दैन। उसलाई भेंड़ाको चिन्ता हुँदैन। उसलाई भेंड़ासँग कुनै मतलब रहँदैन।“म त्यो गोठालो हुँ जसले भेंडा़लाई साँच्चो मनले रक्षा गर्छ। म मेरा भेंडा़हरू चिन्दछु जसरी पिताले मलाई चिन्नुहुन्छ। अनि भेंडा़ले पनि मलाई चिन्दछ जसरी म पितालाई चिन्दछु। म ती भडाहरूका लागि जीवन अर्पण गर्छु। 16 मसँग अन्य भेंडा़हरू पनि छन्। तिनीहरू यस झुण्डमा छैनन्। मैले तिनीहरूलाई पनि अगुवाई गर्नु पर्छ। तिनीहरूले मेरो आवाज सुन्नेछन्, तब तिनीहरू एउटै झुण्डमा हुनेछन् तब त्यहाँ, एउटा बगाल अनि एउटै गोठालो हुदँछ। 17 मेरो पिताले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने म मेरो जीवन दिनु तयार छु ताकि त्यो म फेरि फिर्ता पाउँनेछु। आमेनयो बचन को पालना गरि यसरि आत्मिकी दियोहरु को खुलासः गर्नु भयको मा परमेश्वरले पर्सस्तामा आसिश दिनु भए को होस praise the lord Comment by अरुणा राई राखाली on September 26, 2013 at 2:39am मेरो ब्याक्तिगत बिचारमा भन्न पर्दा - जसरी एउटा सफल बिध्यार्थी बन्नलाई पचास प्रतिशत हात बिध्यार्थीको हुन्छ भने पचास प्रतिशत हात शिक्षकको पनि हुन्छ किनकि बिध्यार्थीले पाएको ज्ञान शिक्षकको शिक्षा माथि भर पर्दछ ! ठीक त्यसरी नै एउटा ( असल ईमानदार अनि आज्ञाकारी ) प्रभुको सन्तान बन्नलाई हामी ख्रीष्टीयानहरुको जिवनमा पनि गोठालो यानीकी हाम्रो पास्टर अगुवाको पनि उती कै हात हुन्छ ! किनकि गोठालोले जहाँ अनि जसरी चराउछन् भेडाहरु पनि उता उतै गोठालोलाई पच्छाउँदै पछि पछि लाग्छन् ! यसैले हामी सबै एउटै पर्मेश्वरको छोरा छोरी भए माफत पनि आज ईसाई जगतमा अनगित बिचारहरु अनि सिधान्तहरु छन् यसैकारण कहिले कहि बाईबलको एउटै बचनको निम्ती ख्रीष्टीयान ख्रीष्टीयान माझ पनि तर्क बितर्क भैइ रहेको हुन्छ !
एउटै पर्मेश्वरको सन्तान भए तापनि कोहि मन्डलीको ख्रीष्र्टीयानहरु शान्त - सुशिल - साधारण सँसारिक सबै कुराहरु देखि कोसौ टाडा पुर्ण रुपले पर्मेश्वरमा समर्पित पर्मेश्वरलाई मन पर्ने जिवन जिइ रहेको हुन्छ भने कुनै मन्डलीका कोहि ख्रीष्टीयहरु पुर्ण रुपले सँसारिक ढाँचा - नाँच गान - मौज मस्ती - रँगी चँगी - श्रीङार पटार - मद मदिरा - सिग्रेट समेत पिएर फराकिलो बाटो भैइ जिई रहेको हुन्छ ! अब यी सब कसरी हुन गयो त ? एउटा पर्मेश्वरलाई पुज्ने दुई किसिमको सन्तान कसरी हुन गयो त यसको एउटै जवाब छ - जस्तो गुरु त्यस्तै चेला ! यानि कि जस्तो गोठाला त्यस्तै भेडा ! मैले मेरो जिवनमा गोठालोहरु दुई किसिमको पाएको छु ! एउटा आफु पनि साँघुलिरो बाटो हिडने अनि आफ्नु बगालको भेडाहरुलाई पनि त्यहि बाटो हिडाउने अनि अर्को आफु खुदै पनि फराकिलो बाटो हिडने अनि आफ्नु बगाललाई पनि त्यतै लाने यसैले भेडाको रुप लिएर मन्डली भित्र ब्वाँसोहरु पस्न नपावोस् भनी पर्मेश्वरसँग प्रार्थना गरौ ! तपाईको यो बल्गमा आजको ईसाई जगतमा भैइ रहेको कुराहरु स्पष्ट छल्केको छ ! धन्यबाद छ यो सत्यता लेख्न्ने साहस गर्नु भएकोमा किनकि हामी मध्ये धेरैलाई यी सबै कुरा थाहा भएता पनि सत्य बोल्न साहस गरेको हुदैन् तर तपाईले गर्नु भएको छ जसको निम्ती पर्मेश्वरले तपाईलाई भरपुर आशिष दिएको होस् ! Comment by Shrawan Bomjan on September 25, 2013 at 8:19am एकदम सहि, भन्नुभयो दाजु, तर आजको यो वर्तमान समयमा प्रभुको आत्माले चलाइएको अगुवा, हामीले पाउन सकिरहेको, अवस्था, छैन । प्राय सबै स्वार्थ,पुरा गर्न र भौतिक लालसामा फस्नेहरु छन्, आजको यो समयको वास्तविक रुपलाई पखालन हजुरले भन्नुभएको कुरा, एकदम सहि छ ! Comment by Renu Bhandari on September 23, 2013 at 4:13pm जयमशिह दादा,
तपाईले भन्नु भएको ठिक हो अगुवा भनेको पद वा ओहोदा खोज्ने व्यक्ति होइन तर सेवा गरि प्रभाव पार्ने व्यक्ति हो, तर यसो भनेर हामीहरुले पछाडि पनि त हट्नु भएन नि अनि मेरो बिचारमा पुल्पिटमा उभिने मात्र अगुवा हुदैनन् दादा हामी सबै अगुवा हौ अनि यो काम हामी सबैको हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो वगालको रक्षा हामीले पनि गर्नु पर्छ जस्तै उनिहरुको निम्ति प्रार्थना गरिदिएर । Comment by sarah rai on September 22, 2013 at 9:09pm एकदम सहि भन्नु भो सिमोन दाई आज कतिपए मन्डलीहरू मा त्यस्तै भाई रहेको छ। सबै मिलेर प्रभुको काम नगरि, कम्जोर आत्माहरूलाई प्रभुको शक्तिमा दोहोरयाउनु को सट्टो पद खोजी रहेको छ। कसैलाई पास्टर पद, कसैलाई डिकन, कसैलाई एल्डर, कसैलाई सचिब, कसैलाई कोषअध्य्ष्य चाहियो रे यस्तै यस्तै कुराहरु धेरै मन्डलीहरूमा सुन्छु साचैनै यो दु:खको कुरा हो। हामिले यस्ता मन्डलीहरू नीम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। Comment by Anit pun on September 22, 2013 at 9:08pm आमेन्। एकदमै राम्रो वचन बाड्नुभएको छ ।॔साँच्चै हामी सवैले विचार र ध्यान दिनुपने॔ महत्वपुण॔ पक्षहरू हुन् ।धन्यवाद। RSS